मुर्तिपूजा सम्बन्धी केहि बचनहरु । - Nepali Christians Site
मुर्तिपूजा सम्बन्धी केहि बचनहरु ।
Posted by youwal rai on November 22, 2013 at 11:05am
आज संसारमा धेरै यस्ता मनिसहरु छन जो साचो परमेस्वरलाई नचिनेर सृटिका अथवा आफ्नो हस्तकल(मुर्ति)हरुलाई आफ्नो उद्दारकर्ता (भागवान्) सम्झी पुजा आराधाना गरिरहेका छन । अनि त्यसलाई चडाएको खनेकुरहरुलाई (अशिस्)प्रसाद सम्झी खाने गर्दछ । तर खृस्टीयन्हरुले किन मुर्तीहरुको पुजा आराधाना गर्दैनन………… ? अनि त्यसलाई चडएको प्रसादहरु खदैनन…………… ? किनभने(प्रस्थान:२०:१:६) मा परम्-प्रभु परमेस्वर स्वयम भन्नुहुन्छ, खोपेर कुनै किसिमका मुर्ती नबन्वनु । आकाश अथवा पृथ्वी पृथ्विमनी पानीमा भएको कुनै आकारको प्रतिमुर्ती नबन्वनु तीनहरुको सामने नझुक्नु पुजा नगर्नु । (१-कोरिन्थ्य्:१०:१४) पावलाले भन्नुभएको छ मुर्तिपुजबाट अलग रहो । किनकी संसारमा मुर्ती केहि पनि होईन र एक बाहेक दोस्रो परमेस्वर छैन (१-कोरन्थि:८:४) यसैकारण हामीले मुर्तिलाई दन्ड्वत पनि गर्दैन्व । किनभने यस संसारमा भएका यवत थोक परमेस्वर्ले सृटी गर्नुभयो वहाँ स्वर्ग र पृथ्विका परमप्रभु हुनुहुन्छ । “नता मनिसहरुका हातबाट वहाँलाई केहि थोकको खचो भएझै पुजा लिनुहुन्छ । किनभने वहाँलेनै सबैलाई जिवन्, सास र सबै चिज दिनुहुन्छ,(प्रेरीत्:१७:२४:२५) ।“ किनकी मुर्तिलाई चडएको बस्तु केहि होईन नत मुर्ती नै । अन्यजातीहरु जो मुर्तिलाई बली चडावछन त्यो परमेस्वर्लाई होईनन तर भुतप्रेतहरुलाई चडावछन । किनकी मुर्तिलाई चडएको बस्तु केहि होईन नत मुर्ती नै । यसैकारण हामीहरु भुत्-प्रेतहरु सिता सहभागी नहुनु भनी पावल आफ्नो बचनमा भन्दछन्,(१-कोरीन्थि:१०:१९:२०) तर ती मनिसहरु जो परमेस्वर्लाई चिनेर पनि तिनिहरुले नता परमेस्वरलाई गर्नुपर्ने महिमा गरे न धन्यबाद नै चडाए तिनिहरुको ह्र्द्य अध्यरो भयो र अबिनाशी परमेस्वरको महिमालाई तिनिहरुले बिनाशी मनिस्, चरा चुरुनगी चारखुट्टे जिवित र घस्रने जन्तुहरुको मुर्तिको रुपमा परिवर्तन गरे । यसकारण परमेस्वरले तिनिहरुका ह्र्द्यका अभिलाषामा छोडिदिनु भयो । किनकी तिनिहरुले परमेस्वरको सत्यतालाई झुट्मा परिवर्तन गरे र सदा सर्बदाको परमाधन्य सृटीकर्तालाई त्यागेर बरु सृटीको पुजा सेवा गरे ,(रोमी-१:२१:२५) । अब हामीहरु परमेस्वरलाई नचिन्ने अन्यजातीहरुको जस्तो कुईच्छाको कामना गर्नु हुँदैन । किनकी परमेस्वरले हामीलाई असुद्ध हुनलाई होईन तर पवित्र हुनलाई बोलव्नु भयो (१-थिस्स्लोनिकि:४;७) ! यसकारण (एफिसी ४:२२:२४) मा भन्दछ्, हामीहरु जो पहिले सचो परमेस्वरलाई नचिन्दाखेरिको आफ्नो ईच्छाअनुसारको भ्रस्ट जिवन बीतावथिएव त्यसलाई त्यागेर आफ्नो मानको आत्ममा नया भएर नया मनिसलाई धरान गरेर चल्नुपर्छ्, जो परमेस्वरको धार्मिकता र सत्यतको पवित्रतामा सृस्ट्री भएको छ । अन्त्यमा, हामीले कुनै मुर्ति, प्रक्रीतिका कुरहरु, नक्सा, आदिमा परमेस्वरलाई खोजेर भेटव्नु सक्दैन्व र त्यस्को पुजा आराधाना गरेर उद्धार मुक्ती पव्न सक्दैन्व । "परमेस्वर त आत्मा हुनुहुन्छ, र वहाँलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्न पर्दछ्,(योहन्न ४:२४) । धन्यवाद ! Views: 147
Comment by youwal rai on November 28, 2013 at 10:22am dhanayabad nana ani dada lai prathana ma rakhidu hola merolagi ki ma parmeswarle dekhwnu vayeko marga ma hirna saku wahako ashal chora banna saku Comment by Shrawan Bomjan on November 27, 2013 at 7:45am सार्है मेहनत गरेर पद संकल गरेर यस बिषयमा प्रष्ट हुन् मदत गर्नु भएको लागि, धन्यवाद । Comment by अरुणा राई ! on November 27, 2013 at 3:52am भाई तपाईले मुर्ति पुजाको बारेमा सँग्रह गर्नु भएको बचनहरु साह्रै एकदमै राम्रो छ ! पर्मेश्वर देखि अन्जान यस सँसारको मुर्ति पुजकहरु कहाँ यो बचन पुग्न पाए सायद उनीको मनको आँखा आवश्यै खुलीने छ ! RSS